Ogaden News Agency (ONA) – Qarax Shiinaha Ka Dhacay oo Khasaare Gaystay.
Qarax Shiinaha Ka Dhacay oo Khasaare Gaystay.
Posted by ONA Admin	/ November 27, 2017
Qarax ka dhacay magaalo xeebeedka Ningbo ee Bariga dalka Shiinaha ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan laba ruux, halka ay ku dhaawacmeen tobaneeyo kale. Qaraxan ayaa dhulka dhigay dhismooyin, iyadoo sidoo kalana laga dareemay xaafado dhowr kilomitir u jira goobta ay wax ka dhaceen.
Waxaa soo baxaya warar is-khilaafsan oo ku saabsan waxa qaraxa sababay. Qaar ka mid ah warbaahinta dowladda ayaa sheegaya in qaraxu uu ka dhacay meel warshad ah, halka warar kale ay sheegayaan in qaraxu ahaa guri la rabay in la dumiyo ama mar horaba la dumiyay.
Magaalada Ningbo ayaa waxay 100 KM dhinaca koofureed ka jirtaa magaalada Shanghai. Saraakiisha ayaa sheegay in aysan wali xaqiijin waxa sababay qaraxaasi. Shiinaha ayaa waxaa ku badan shilalka ka dhaca goobaha warshadaha ah.